Romanian kushanya kuri kuwedzera muIsrael
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Romanian kushanya kuri kuwedzera muIsrael
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Israel Breaking News • nhau • Resorts • Romania Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Romania rave rave nyika huru muEastern Europe senzvimbo yevashanyi veIsrael, ichidarika kunyange Poland, nyika iyo yagara ichikwirisa chinhanho mumakore apfuura.
Kufarira kwevaRomania kuIsrael kuri kuramba kuchikura, sezvo huwandu hwevashanyi gore rino hwatopfuura chinangwa chezviuru zana zvakatarwa sechinangwa chekupera kwegore rino.
Zvinoenderana neazvino dhata kubva ku Ministry of Tourism muIsrael, huwandu hwevashanyi veRomania vanoshanyira nyika mumwedzi gumi nembiri yegore yaive 11, 100,900% yakakwira kupfuura panguva imwechete gore rapfuura uye inopfuura zvakapetwa kaviri ichienzaniswa nguva ya35. Muna Gumiguru moga, vangangoita zviuru makumi maviri veRomania vakashanyira Israel, uye muna Mbudzi - 2016.
Vhiki rega rega, anopfuura makumi mana ndege dzinobva kuBucharest's Henri Coandă International Airport kuenda kuBen Gurion Airport kuTel Aviv. Kubhururuka kwacho kunotora maawa angangoita 40, ichiita imwe yendege ipfupi kuenda kuMiddle East.
Dzinopfuura makumi matanhatu nendege dzendege zvino dzinobatanidza Tel Aviv neEilat kuenda kunhandare huru muRomania - Bucharest, Timisoara, Cluj, Iasi neSibiu… 60 zvichienzaniswa na2018 yakanyoresa kuwedzera kwe2016 muzana yevashanyi veRomania, uye maonero anoramba akanaka kwazvo.